Raw Lorcaserin HCL Powder (846589-98-8) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker
Lorcaserin hydrochloride အမှုန့်သည် serotonin 2C (5-HT2C) receptor agonist နှင့်နှုတ်အားဖြင့်ဆေးပေးသောဆေးဖြစ်သည်။
စွမ်းဆောင်ရည်: 1380kg / လ
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin HCL အမှုန့် (846589-98-8) ကဗီဒီယို
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin HCL အမှုန့် (846589-98-8) အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်
ဓာတုအမည် ကုန်ကြမ်း Lorcaserin HCL အမှုန့်, Lorcaserin
CAS အရေအတွက် 846589-98-8
InChIKey ITIHHRMYZPNGRC-QRPNPIFTSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C11H15Cl2N
မော်လီကျူး Wရှစ် 232.15
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ lorcaserin ၏ဝက်ဘဝကိုခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 11 hours.Lorcaserin အမှုန့်ဆီး (92%) နှင့်မစင် (2.2%) ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ဖယ်ထုတ်ပစ်သည်ဖြစ်ပါတယ်
ပျော်ဝင် ရေတွင်ပျော်ဝင်နေသော: 0.0709 မီလီဂရမ် / mL
သိုလှောင်ခြင်း Temperature ကို C ° -20 ။
Application အလေးချိန်များအတွက် serotonin 2C (HT2C) အဲဒီ receptor agonist အစားအစာစားသုံးမှု loss.Decreases နှင့်ဗဟိုမွတ်မပြေနိုင်သောအားပေးအားမြှောက်
ကုန်ကြမ်း Lorcaserin Hcl အမှုန့် (846589-98-8) ဖျေါပွခကျြ
Lorcaserin hydrochloride အမှုန့်သည် Lorcaserin အမှုန့်နှင့် Hydrochloric acid နှင့်ညီမျှသော hydrochloride ဖြစ်သည်။ အဝလွန်ခြင်းကိုတားဆီးစေသောဆေးတစ်ခုအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Lorcaserin hydrochloride သည် 5HT2c receptor agonist ဖြစ်ပြီး BMI ≥30ရှိသောလူကြီးများအတွက် BMI ≥27ရှိသူများနှင့်အနည်းဆုံးအလေးချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည့်သွေးတိုးရောဂါ၊ အမျိုးအစား2ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ် dyslipidemia.Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်သည်အစာစားချင်စိတ်ကိုနှိမ်နှင်းခြင်းဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ကျေနပ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်၊ 5-HT2B receptors ကိုအသက်သွင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော valvular ရောဂါမိုးရွာသွန်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်စဉ်းစားသည်။ ဦး နှောက်၏areaရိယာသည်ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုနှင့်စားသုံးမှုကိုထိန်းညှိရာတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ play မှပါဝင်သည်။ ဤ receptors များကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့် Lorcaserin hydrochloride အမှုန့်သည်အစာစားချင်စိတ်ကိုလျော့ကျစေပြီးပုံမှန်အားဖြင့်အစားအစာလျော့နည်းပြီးနောက်၌ပင်လူတစ် ဦး အားအပြည့်အဝခံစားရစေသည်။ ၂ နှစ်ကြာစိစစ်ပြီးနောက် FDA မှယနေ့အတည်ပြုခဲ့သည်။
Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်အထူးလျှော့-ကယ်လိုရီဓာတ်စာတစ်ခုတွဲဖက်အဖြစ်ညွှန်ပြနှင့်ဆေးခန်းအဝလွန်လူကြီးများ (30 ၏ BMI / m2 ကီလိုဂရမ်သို့မဟုတ် သာ. ကြီး) နှင့်အဝလွန်လူကြီးများ (27 ကီလိုဂရမ် / m2 သို့မဟုတ် သာ. ကွီးမွတျ၏ BMI) တွင်နာတာရှည်အလေးချိန်စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုတိုးပွါး အနည်းဆုံးအလေးချိန်-related comorbid အခွအေနေနှင့်အတူ။
Lorcaserin Hydrochloride အမှုန့်အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူအသုံးပြုသည်။ ဒါဟာတခါတရံဆီးချို, မြင့်သောလက်စထရော, ဒါမှမဟုတ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအဝလွန်ခြင်းကုသရန်အသုံးပြုသည်။
Lorcaserin Hydrochloride (ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါ, ဆီးချို, သွေးတိုးကဲ့သို့) မဆိုအခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေဆက်ဆံပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင့်ဆရာဝန်ဤအခြေအနေများဆက်ဆံဖို့သတ်မှတ်ထားသည့်ထားပြီးအခြားမည်သည့်ဆေးကိုယူပြီးထားပါ။
လှုပ်ရှားမှု၏ Lorcaserin Hcl အမှုန့် (846589-98-8) ယန္တရား
အတိအကျယန္တရားမသိသောဖြစ်သော်လည်းက hypothalamus ၏ arcuate နျူကလိယထဲတွင် anorexigenic လိုလားသူ opiomelanocortin အာရုံခံအတွက် 5-HT2C receptors ၏ရွေးချယ် activation ပါဝင်သည်ဟုယူဆရသည်။ ဤသည် melanocortin-4 receptors အပေါ်ပြုမူရသော alpha-melanocortin လှုံ့ဆော်ဟော်မုန်း၏လွှတ်ပေးရန်မြှင့်တင်အားဖြင့်ယုတ်လျော့အစားအစာစားသုံးမှုနှင့်မွတ်မပြေမှု။
Lorcaserin hydrochloride အမှုန့်သည်အစာစားချင်စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းဖြင့်အလုပ်လုပ်သည်။ အထူးသဖြင့် serotonin အတွက် ဦး နှောက်ကိုလက်ခံပေးသော neurotransmitter၊ အစားအစာများစားသုံးမှုကို hypothalamus ၏ ventromedial နျူကလိယနှင့်နှစ် ဦး နှစ်ဖက် hypothalamus တွင်တည်ရှိသောငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုဗဟိုတွင်တည်ရှိပြီးကျဲကျဲစင်တာကထိန်းချုပ်ထားသည်။ အဆင့်မြင့်စင်တာများနှင့်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းမှသွင်းအားစုအမျိုးမျိုးသည် arcuate နျူကလိယတွင်အစားအစာစားသုံးမှုကိုထိန်းချုပ်သောအာရုံခံဆဲလ်အမျိုးအစား ၂ ခုရှိသည်။ ပထမတစ်ခုအနေဖြင့် agouti-protein ပရိုတိန်းနှင့် neuropeptide Y ကိုထုတ်လုပ်သောအစားအစာစားသုံးခြင်းကိုလှုံ့ဆော်သည်။ နှင့်ဒုတိယအချက်မှာကိုကင်းနှင့်အမ်ဖီတမင်းဓာတ်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသောမှတ်တမ်း (CART) နှင့်လိုလားသော opiomelanocortin (POMC) အာရုံခံဆဲလ်များပါ ၀ င်သည့်အစားအစာစားသုံးမှုတားဆီးပိတ်ပင်မှုအုပ်စု။ POMC တွင် 5-HT 2C receptors များပါ ၀ င်သည်။ activated သောအခါ alpha-melanocyte-stimulating hormone (alfa-MSH) ကိုထုတ်ပေးသည်။ ၎င်းသည် inhibitory နှင့် stimulatory neuron များက hypothalamus တွင် paraventricular nucleus ကိုထပ်မံထုတ်လုပ်သည်။ Paraventricular နျူကလိယသည် Melanocyte4receptors (MC4R) ပါ ၀ င်သည်။ ကုထုံးများ၌အစာစားချင်စိတ်ကိုတားဆီးပေးသည်။ နောက်ထပ် alfa MSH သည် hypothalamus ရှိ paraventricular nucleus တွင် MC5R အပေါ်ပြုမူသည်။ supratherapeutic ဆေးများ, lorcaserin hydrochlorider ကိုလည်း 2-HT 4B နှင့် 5-HT 2A receptors အပေါ်ပြုမူ။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား Lorcaserin Hcl အမှုန့် (846589-98-8) ၏
Lorcaserin HCL အမှုန့်အလယ်ပိုင်း POMC သည့်စနစ်မှတစ်ဆင့်အစားအစာစားသုံးမှုကိုလျော့ချဖို့စဉ်းစားသောရွေးချယ် 5-HT2C အဲဒီ receptor agonist ဖြစ်ပါတယ်။ Lorcaserin HCL အမှုန့်အကြိုးကြေးဇူးမြား:
Lorcaserin HCL အမှုန့်အဝလွန်ခြင်းဆက်ဆံဖို့အစားအသောက်နှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအတူအသုံးပြုသည်။
Lorcaserin HCL အမှုန့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ဆီးချို, မြင့်သောလက်စထရော, ဒါမှမဟုတ်မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားနှင့်ဆက်စပ်သောစေခြင်းငှါအဝလွန်ခြင်းကုသရန်အသုံးပြုသည်။
Lorcaserin HCL အမှုန့် (ထိုကဲ့သို့သောနှလုံးရောဂါ, ဆီးချို, သွေးတိုးကဲ့သို့) မဆိုအခြေခံကျန်းမာရေးအခြေအနေဆက်ဆံပါလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အကြံပြု Lorcaserin Hcl အမှုန့် (846589-98-8) သောက်သုံးသော
Lorcaserin HCL အမှုန့်သည်တက်ဘလက်ပုံစံဖြင့်ဖြစ်ပြီးတစ်နေ့လျှင် ၁-၂ ကြိမ်အစားအစာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ Lorcaserin ကိုကယ်လိုရီလျှော့ချခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့်အတူအသုံးပြုရမည်။
အကြံပြုထားသည့် lorcaserin HCl အမှုန့်သည် ၁၀ မီလီဂရမ်ကိုတစ်နေ့နှစ်ကြိမ်ပါးစပ်ဖြင့်သောက်သုံးသည်။ Lorcaserin ကိုအစားအစာနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ Lorcaserin hcl သည်အပတ် ၁၂ တွင်အနည်းဆုံး ၅% ကိုယ်အလေးချိန်ကျဆင်းမှုမရှိသောလူနာများအားဤကုသမှုခံယူသူများသည်ဆက်လက်ကုသမှုဖြင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိသောကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းမဖြစ်နိူင်သောကြောင့်ရပ်ဆိုင်းသင့်သည်။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး Lorcaserin Hcl အမှုန့် (846589-98-8) ၏
Lorcaserin Hcl အမှုန့်ကိုကိုယ်အလေးချိန် ၃၀ နှင့်အထက် (အဝလွန်) ရှိသည့်လူကြီးများတွင်နာတာရှည်ကိုယ်အလေးချိန်ထိန်းညှိခြင်းအတွက်ကယ်လိုရီလျှော့ချခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည် BMI ၂၇ နှင့်အထက် (အဝလွန်) ရှိသူများနှင့်အနည်းဆုံးကိုယ်အလေးချိန်မြင့်မားသောသွေးပေါင်ချိန် (သွေးတိုးရောဂါ) သို့မဟုတ်မြင့်မားသောကိုလက်စထရော (dyslipidemia) ရှိသည့်လူကြီးများအတွက်လည်းအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအချို့လည်းရှိနိုင်သည်။ အောက်ပါအတိုင်း:
▲ lorcaserin နှင့်ဆက်စပ်သည်အခြားလျော့နည်းဘုံပေမယ့်လေးနက်သောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများပါဝင်သည်: